4 Injineer oo lagu dilay qarax ka dhacay Ceelwaaq | Mustaqbal Radio
Home - Wararka Somalia - 4 Injineer oo lagu dilay qarax ka dhacay Ceelwaaq
4 Injineer oo lagu dilay qarax ka dhacay Ceelwaaq
May 17, 2017	23 Views
Ceel-waaq: Wararka naga soo gaaraya Xadka kala qeybiya dalalka Somali ao Kenya ayaa sheegaya in qarax xoogan lala eegtay gaari ay saarnaayeen Injineero udhashay dalalka Somaliya iyo Kenya.
Injineeradan la qarxiyay ayaa ka shaqeynayay Deegaan lagu magacaabo Number City oo ka tirsan degmada Ceel-Waaq Kenya oo ay ugaareen maalmo ka hor howlo shaqo.
Dadkan la qarxiyay ayaa dhawaan ka soo gudbay deegaanada Gaarisa waxeyna horay usoo mareen Wajeer iyagoo maalmahanba ku sugnaa halka qaraxa Gelinkii dnabe ee maanta lagula eegtay sida ay noo sheegeen Suxufiyiin goobta ku sugan.
Injineerada ayaa qaraxa loo dhigay gaari nooca Land Cruserka loo yaqaano oo ay wateen xili ay isku dayayeen iney caraabaan maadaama arimo amni darteed ay isaga hoydaan xiligayada casar gaabadkii Number City.
Saraakiil ayaa Mustaqbal uxaqiijisay in Qaraxa lagu dilay 4 Injineero ah oo laba kamid ah ay yihiin Kenya halka labada kalena ay Somali ahaayeen.
Dadka la qarxiyay ayaa deegaanka utagay Farsameynta Towero ay leedahay Shirkada Isgaarsiinta Kenya ee SafariCom oo dhawaan laga qarxiyay.
Qaraxa kadib goobta waxaa gaaray Ciidamo isugu jira Somali iyo Kenyan waxeyna goobta ka sameeyeen howlgalo lagu baadi goobayay kooxihii qaraxa geystay waloow aan la soo sheegin wax dad ah oo la soo qbatay.
Al-Shabaab ayaa qaraxyo la bartilmaameedsata Gawaarida ay wataan Saraakiisha iyo Shaqaalaha Dowladda Kenya iyo tan iyo 2011-kii xiligaas oo Somaliya ay soo galeen Cutubyo katirsan Ciidamada Kenya eek u sugan Gobolada Jubaland.